Vaovao - Ny lakilen'ny fiara dia manana fiasa miafina efatra, afaka mamonjy aina amin'ny fotoana maika
Ny lakilen'ny fiara dia manana fiasa miafina efatra, afaka mamonjy aina amin'ny fotoana maika
O fotsinypenina ny varavaran'ny taksi
Ny ankamaroan'ny fiara dia tsy afaka mamoha ny varavaran'ny taksi rehefa manindry bokotra lavitra ianao, ary aorian'ny fanindriana azy indroa dia afaka sokafana daholo ny varavarana.
Ny mpamily sasany dia mandray ny fiara amin'ny toerana fijanonana lavitra, Raha manokatra varavarana taksi fotsiny izy ireo dia afaka manakana ireo olon-dratsy tsy hiditra amin'ny fiara avy eo amin'ny faran'ny sezak'ilay fiara na eo am-baravaran'ny seza mpandeha aloha. Tena sarobidy tokoa io asa famonjena aina io, sa tsy izany, indrindra ho an'ireo mpamily vehivavy?
Vonoy ny fitaratry ny fiara
Rehefa avy mijanona ny fiara dia vonoina mivantana ny motera, avy eo sintomy ny frein-tanana hivoahana ny fiara dia hiala ianao. Fa niherika tampoka ny lasa, hita fa hadino ny manidy ny varavarankely na ny sunroof. Inona no hataonao amin'izao fotoana izao? Tsy maintsy miverina ao anaty fiara izy io, mamelona ny switch switch, manidy ny varavarankely sy ny sunroof, ary avy eo hihidy indray ny fiara. Manelingelina ve?
Raha ny tena izy, tsy fantatry ny ankamaroan'ny olona, ​​aorian'ny famonoana ny fiara, raha mbola manindry sy mitazona ny bokotra hidin-kazo amin'ny fanalahidy ianao, dia hikatona ho azy ny fitaratra sy ny faravodilan'ny fiara! Amin'ny fiara sasany, raha mbola ampiasaina ny fiasan-damba fanaraha-maso lavitra dia hitsangana sy hanidy ho azy ny varavarankely rehetra. Tena azo ampiharina io fiasa io, ny filazantsaran'i Marta, haha.
Find ny fiara haingana
Raha tsy hitanao haingana ny fiaranao dia afaka manampy anao ny bokotra fanalahidy. Ohatra, rehefa mankany amin'ny toeram-pivarotana lehibe ianao ary mijanona amin'ny fiara fitobiana ambanin'ny tany ny fiaranao dia mila mitady erak'izao tontolo izao ianao rehefa miverina haka izany. Aza mikoropaka amin'izao fotoana izao. Raha te hahita ny fiaranao ianao dia mila tsindrio fotsiny ny bokotra mena amin'ny lakilen'ny fiara mba hampandeha tsara ny fiara. Hanamora ny fitadiavana ny fiaranao izany fa hitandrina kosa, Aza mampiasa an'io fiasa io raha misy fotoana miseho, satria hisy fiantraikany amin'ny hafa izany rehefa mampiasa azy ianao.
Modely maro ny fanalahidy fanaraha-maso lavitra manana bokotra hanampy anao hanokatra ho azy ny vatan-kazo. Tsindrio lava ny bokotra famaha vatan-kazo (amin'ny fiara sasany, kitiho indroa), hisokatra ho azy ny vatan-kazo. Raha vao mivoaka avy ao amin'ny supermarket ianao ary mitondra kitapo lehibe eny an-tananao, dia ho azo ampiharina amin'izao fotoana izao, ary afaka manome fahafaham-po be dia be amin'ny fikitihana tokana.